समय फेरिदै छ । परिवर्तनले त्यही रफ्तार समातेको छ । समयको प्रवाहसँगै सामाजिक गतिविधि पनि फेरिदैछन् । हामी आफैं परिवर्तित हुनुपर्दछ । तर, कस्तो परिवर्तन अगाल्ने भन्नेबारेमा भने सबैले सचेत जरुरी छ । समयसँगै आएको परिवर्तनलाई नपच्छ्याउने हो भने समयको गतिले त्यसलाई डाइनोसर बनाइ दिन सक्छ । त्यसैले समयसापेक्ष परिवर्तनलाई नकार्न सकिदैन अर्थात मिल्दैन ।
फेरि परिवर्तनको नाममा आफ्नै परिचय वा पहिचान गुम्ने गरि परिवर्तित हुनु कहाँसम्म उचित होला ? त्यो मननीय पक्ष हो । सन्दर्भ हामीले मनाउँदै आएका चाडवाडहरुमा पनि देखा परेको परिर्वनको हो । यसैकै ज्वलन्त उदाहरण हो गायक दुर्गेश थापाको तिहार गीत ‘ह्याप्पी तिहार चिसो वियर’ बोलको गीतको विवाद । तिहारलाई लक्षित पारेर सार्वजनिक गरेको उक्त गीतमा ‘निकाल गाँजा खाँउ खाजा’ जस्ता आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै गीत बन्द गर्न लगाइयो । उनका शब्दले सामाजिक खलल पुग्यो भन्दै उनी पक्राउ परे ।
सञ्चार माध्यममा उनी केहीदिन देखि चर्चामा छन् । सामाजिक सञ्जाल विभाजित छ । कतिले सरकारलाई सोधेर गीत सिर्जना गर्नुपर्ने हो र ? भनेर समेत सरकारलाई व्यङ्ग्य कस्न थालेका छन् । पछिल्ला दिनमा सास्कृतिक पर्वहरूमा पनि निकै परिर्वन देखिएको छ । नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारसँग परिवर्तनको नजिकको सम्बन्ध रहिआएको छ ।
यो चाड औशीँमा मनाए पनि पूर्णिमा झैं उज्यालो बनाएको हुन्छ । त्यसकारण त यस चाडलाई दीपावली,यमपञ्चक वा दीप मालिका पनि भन्ने गरिन्छ । दिदी यमूनाले आफ्नो भाई राजा बलिको दीर्घायुका लागि यमराजलाई छल गर्न वा विदाईका निम्ति गरिएको पाँच दिनसम्मको पूजालाई यमपञ्चक अथवा तिहार भनिन्छ । पहिलो दिन यमदुत कागको पूजा,दोस्रो दिन द्धारपाल कुकुर, तेस्रो दिन गाई र लक्ष्मीपूजा, चौथो दिन गोवद्र्धन पुजा र पाचौं दिन भाई टिका गरिने प्रचलन छ ।
वरिष्ठ सस्कृतिविद् प्रा.डा. जगमान गुरुङका अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिन यमराज आफ्नो बहिनी यमुनाको घरमा गएर टीका लागाएको पौराणिक कथा छ । तर यसको वैदिक कथा अर्कै छ । ऋग्वेदको ‘यमयमी शुद्ध’ भन्ने कथामा छ यो कुरा । यम र यमी भन्ने जुम्ल्याहा दाजुबहिनी थिए । एक दिन बहिनी यमीले दाइ यमसँग बैवाहिक जीवनमा बाधिन प्रस्ताव गर्छिन् । यौनसम्बन्धमा जाने प्रस्तावले उ विचलित हुन्छ । यमले बहिनीलाई एउटै आमाबाट एकै समयमा जन्मेकाले हामीबीच त्यस्तो सम्बन्ध हुँदैन भनेर सम्झाउँछ । मान्छेको धर्म भनेकै नैतिकतामा छ । पछि यहि कुरा ऋग्वेदले यमुना र यमराजको कथामा परिणत गर्यो । बेद भनेको समाजका चालचलनलाई लिपिवद्ध गरेको कुरा हो । त्यसबेला समाजमा हुने यौन जीवनलाई सु–ब्यवस्थित गर्दै आजको यो सभ्य समाज निर्माण भएको छ । यस्तो चाड अन्य कुनै मुलुकमा छैन ।
दिदी यमुनाले बलिराजालाई टीका लगाइदिँदा यमराज सामु मैले मेरो भाईलाई टिका लगाइदिँदा तेल र मखमली माला नसुकी नओईली लान पाउदैनौ भनेर इच्छा प्रकट गरेको कथा छ । सोही अनुरुप भाईबलीको तेल र मखमली माला सुक्न र ओइलिन समय लागि दीर्घायु भएको जनविश्वास छ । बलिराजाले दिदी यमुनाका यी कार्य आफ्ना लागि फलदायी भएको भन्दै देउसी खेल्दै यो खबर सबैतिर पठाएको मानिन्छ । यसै विश्वासका आधारमा देउसी खेल्ने प्रचलन शुरू भएको हो । तर,अहिले देउसीका नाममा विभिन्न विकृति भित्रिएका छन् । देउसीमा तोकेर पैसा माग्ने,थोरै दिए गाली गर्ने जस्ता पक्ष पछिल्ला देउसीमा हाभी हुँदै गएको देखिन्छ । यसले पर्वहरूको सांस्कृतिक पक्षमा विचलन आएको स्पष्ट गर्छ ।
लक्ष्मीपूजा देखि भाइटिकासम्मको दिन अझ महत्वपूर्ण मानिन्छ । अझ देउसी भैलो त तिहारको पर्यायवाची नै भए । अनि त्यसमा हुने सांगीतिक माहोलले झनै रौनक थपेको छ । तिहारमा गाइने भैलो र भट्टाईने देउसीले हाम्रो सास्कृतिक रौनक समेत बढाएका छ । देउसी भट्टाउदा पौराणिक कथा,दन्ते कथा वा बलिराजाको कथा ,महिमा गाथा गाउने प्रचलन छ । साथै घरमा आएका देउसेहरुको कथा सुन्न आतुर हुन्थे घरधनीहरू पनि तर केही दशक यता काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा यी कथा बोकेका देउसीको लय हराएको अभाष भएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
आफ्ना मौलिक बाजा मादलको सट्टा उच्च प्रविधि युक्त पाश्चात्य बाजा, दन्ते कथाको सट्टा मनोमानी भट्टाउने प्रचलन बढेको छ । घरधनीले देउसेहरुलाई दियोमा तेल थपे झैं खुशी मनले स्वागत गर्नुको सट्टा मूल ढोकाभित्रैबाट ताल्चा लगाई धपाउने गरेका समाचार पनि आउने गरेका छन् । देउसेको भट्टाई चाख मानेर सुन्नु भन्दा झिझो मानी आँखा सन्काई रहेका हुन्छन अचेल धरधनीहरू । अचेल पौराणिक कथा सुनेर आफ्नो गक्ष्य अनुसारको सिदा÷दान गरी देउसेको आशीष थाप्नु त परै जाओस् सकेसम्म आउदै नआइ दिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय पालिरहेका हुन्छन् ।
देउसेहरु पनि आफुले आफ्नो सास्कृतिक दायित्व सम्झि संस्कारको अनुसरण गरी, दिइएको सिदा लिने गरेको पाइदैन । देउसी, देउसी नभएर दादागिरी देखाउने वा व्यापारिक हिसाबले खेल्न थालेका छन् । पत्र पठाई हामीलाई यति रकम चाहिन्छ भन्दै आएको सुनिन्छ । यी र यस्तै कार्यले गर्दा हाम्रा सांस्कृतिक चाडको महत्व कम हुँदै गएको छ । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्ष ओझेल बन्दै गएको छ ।
यी पक्तिंहरू लेखिरहँदा हाम्रो देउसी भैलो नास्सिसक्यो, मासिसक्यो, सिद्धिसक्यो भन्ने निष्कर्ष मेरो होइन । सिर्फ चाहना यो हो कि हाम्रो मौलिकतालाई जोगाउन आफ्नै मौलिक बाजागाजाको प्रर्वद्धन गरौं भन्ने पक्तिकारको इच्छा हो । इच्छा यो होइन कि परिवर्तित जीवन शैली नअपनाउ, चाहना यो हो कि आधुनिकताले हाम्रो मौलिक परिचय र पहिचानमा खिया नलगाईदियोस् । हैन भने आफ्नो साँस्कृति र संस्कार आफैले जगेर्ना नगरे कस्ले गर्ने ?
प्रकाशित १0 कार्त्तिक २0७६ , आइतबार | 2019-10-27 11:10:18